Global Voices teny Malagasy » Netizen Report: Roa taona taorian’ny fandosirana ny fanafihan’ny miaramila tany Myanmar, miatrika fanapahana finday ao Bangladesh ireo mpitsoa-ponenana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Septambra 2019 5:54 GMT 1	 · Mpanoratra Ellery Roberts Biddle, Netizen Report Team Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsimo, Azia Atsinanana, Bangladesh, Myanmar (Birmania), Fidirana, Mediam-bahoaka, Sivana, Zon'olombelona, Tatitry ny Mpiserasera, GV Mpisolovava
Sary azon'ny rehetra ampiasaina.
Ny Advox Netizen Report dia manolotra topi-maso iraisam-pirenena momba ireo fanamby, fandresena ary vaovao malaza eo amin'ny sehatry ny teknolojia sy ny zon'olombelona manerana izao tontolo izao. Mandrakotra ireo vaovao sy hetsika nanomboka ny 30 aogositra – 6 septambra 2019 ity tatitra ity.
Tamin'ny 2 septambra, nodidian'ny  governemantan'i Bangladesh ireo orinasam-pifandraisandavitra mba hanakana ireo tambajotra finday  any amin'ireo tobin'ny mpitsoa-ponenana izay onenan'ny olona iray tapitrisa, ary Miozolomana Rohingya ny ankamaroan'izy ireo.
Sahabo ho telo ampahefatr'ireo mpitsoa-ponenana ireo no nipetraka tany amin'ny toby ao atsimon'i Bangladesh nanomboka tamin'ny taona 2017, taorian'ny fandosirana ny fanafihan'ny miaramila ny tanindrazan'izy ireo ao Myanmar. Nilaza ny tompon'andraikitra fa natao hiarovana ny filaminam-pirenena ny fanakatonana ny tambajotra finday, manondro ireo tranganà herisetra izay nipoaka tao amin'ny toby.
Nilatsaka ny baiko rehefa nanao fihetsiketsehana faobe tao amin'ny tobin'ny mpitsoa-ponenana ao Cox's Bazar ireo mpitsoa-ponenana Rohingya an'analiny, izay nitaky zom-pirenena avy amin'ny governemanta Myanmar. Tsy omen'ny manampahefana zom-pirenena ny vahoaka Rohingya teraka tany amin'ny faritany Myanmar.
Na dia niara-niasa tamin'ny Firenena Mikambana aza ny manampahefana avy any Bangladesh mba hampody ny sasany amin'ireo olona ireo, maro no nandà tsy hiverina, fa miandry antoka hahazo zon'olompirenena ao Myanmar.
“Nangataka fifampiresahana tamin'ny governemanta Birmana izahay. Saingy mbola tsy nahazo valiny avy amin'izy ireo,” hoy ny mpitarika ny Rohingya, Mohib Ullah nandritra ny fihetsiketsehana.
Nanome baiko ihany koa ny Vaomiera Mpandrindra ny Fifandraisandavitra any Bangladesh mba hanamarina ireo mpampiasa finday ao amin'ny toby ao anatin'ny herinandro, amin'ny alalan'ny fanamafisana ny anarana sy ny adiresy ampiasaina hisoratana ny karatra SIM tsirairay. Nangatahana ihany koa ireo mpandraharahan'ny fifandraisandavitra mba hanakenda na hanalefaka ny tambajotra any amin'ireo faritra sisintany amin'i Myanmar ary hanakana ny fivarotana ireo vokatra sy tolotra finday ho an'ireo mpitsoa-ponenana Rohingya.
Nanameloka mpamokatra horonantsary noho ny lahatsoratra tamin'ny Facebook i Myanmar
Mandritra izany fotoana izany, ao Myanmar ihany, nomelohina sy nosazian'ny fitsarana Yangon higadra herintaona an-tranomaizina ilay mpamokatra sarimihetsika sady mpiaro ny zon'olombelona Min Htin Ko Ko Gyi noho ny famoahana fanambarana  – tao amin'ny Facebook – izay hitan'ny fitsarana fa “mety hahatonga izay manamboninahitra, miaramila, tantsambo na mpiasan'ny fiaramanidina, ao amin'ny tafika, tafika an-dranomasina na Tafika an'habakabaka hikomy na tsy hanaja sy tsy hanao ny adidiny … ”
Nanakiana ny Lalàm-panorenana 2008 ao Myanmar sy ny andraikitra omen'izany ho an'ny miaramila ao amin'ny governemanta ilay lahatsoratra tao amin'ny Facebook. Amin'ny maha mpanorina ny Fetiben'ny Sarimihetsika Iraisam-pirenena Human Rights Human Dignity, malaza amin'ny fomba fijeriny manakiana  mivantana an'i Aung San Suu Kyi, mpitarika sivily voalohany ao Myanmar taorian'ny fitondrana miaramila 49 taona i Min Htin Ko Ko Gyi.
Mamaly ny fanafihana DDoS avy any amin'ny tanibe Shina ny forum web Hong Kong
Niharan'ny fanafihana  avy amin'ny tafondro goavana ao Shina  ny forum LIHKG  mitovy amin'ny Reddit ao Hong Kong, fitaovana ampiasaina hitantanana ny fanafihana distributed denial-of-service  (DDoS) amin'ny alàlan'ny fametrahana script [fihetsika atao] amin'ny solosaina izay mijapy zotra goavana amin'ny tranokala ary mamily azy ireo indray ho any amin'ireo tranonkala lasibatra.
Sehatra iray lehibe fizarana vaovao sy firesahana paikady momba ny fihetsiketsehana manohitra ny fampodiana ao Hong Kong hatramin'ny volana martsa ny LIHKG. Natomboka ny fihetsiketsehana talohan'ny diabe 31 Aogositra , ary nolazain'ny polisy Hong Kong fa “tsy ara-dalàna”.
Nosamborina ilay Nizeriana mpanao gazety sady mpisolovava ara-politika
Nosamborin ‘ny polisy federaly Nizeriana tamin'ny 22 Aogositra tany an-tranony i Agba Jalingo,  mpamoaka ny CrossRiverWatch , gazety antserasera. Filohan'ny  African Action Congress, antoko politika naorin'i Omoyele Sowore, mpitarika ny fihetsiketsehana #RevolutionNow any am-ponja ankehitriny any Nizeria ihany koa i Jalingo.
Voampanga  tamin'ny famadihana, fampihorohoroana, fitompoana sy fanakorontanana vahoaka tao amin'ny Fitsarana Ambony federaly any Abuja i Jalingo noho ny “fiarahamiasa tamin'ny hetsika #RevolutionNow” mba hanery “tsy amin'ny fomba demaokratika” ny governemantan'i Ayade hifarana amin'ny alàlan'ny fomba feno herisetra. Raha voaheloka izy dia mety higadra mandra-pahafatiny, na mandoa lamandy na izy roa mihitsy.
Manitatra ny sehatra amin'ireo mpanome tolotra antserasera ny mpandrindra ny haino aman-jery Tiorka
Any Torkia, nanan-kery nanomboka tamin'ny 1 aogositra ny lalàna vaovao , mitaky amin'ireo mpamatsy vatoaty antserasera rehetra mba hahazo fahazoan-dàlana amin'ny fampielezam-peo avy amin'ny Filankevitra ambony momba ny Radio sy Televiziona (RTÜK). Mihatra amin'ireo tolotra mpandefa mivantana iraisam-pirenena sy eo an-toerana toy ny Netflix sy BluTV, mpamatsy votoaty izay manolotra votoaty am-peo sy an-tsary amin'ny alàlan'ny Periscope na YouTube Live, ary ireo tranonkala fampitam-baovao izay mitantana dokam-barotra ny lalàna.
Ankoatra ny fanomezana fahazoan-dàlana, hanara-maso ny votoatin'ireo mpamatsy tolotra ny RTÜK amin'ny fanitsakitsahana ny lalànan'ny fampahalalam-baovao eo an-toerana, izay lasa nihitatra. Azo sivanina ny votoaty antserasera noho ny votoaty vetaveta na manohitra ny “soatoavina ara-maoraly”, manelingelina ny filaminam-bahoaka na manohintohina ny filaminam-pirenena.
Fanitsakitsahana ny zon'olombelona ny fanakatonana ny tambajotran'i Kashmir, hoy ireo mpisolovava
Nomelohin'ny vondron'ireo manampahaizan'ny Firenena Mikambana tarihan'i David Kaye , Iraka Manokan'ny Firenena Mikambana misahana ny fampiroboroboana sy fiarovana ny zo halalaka amin'ny hevitra sy maneho hevitra ny fanakatonana ny aterineto sy ny fampahalalam-baovao ataon'ny governemanta Indiana ao Jammu sy Kashmir, izay nitohy hatramin'ny harivan'ny 4 Aogositra. “Endrika fanasaziana iraisana atao amin'ny mponin'i Jammu sy Kashmir ny fanakatonana, ary tsy misy antony momba ny fandikan-dalàna akory”, hoy izy ireo nanoratra
Nanakiana ihany koa ny fanakanana noho ny antony maha-olona sy zon'olombelona ny fanambarana iombonana mitokana, izay nosoniavin'ireo mpiaro ny zon'olombelona sy ny zo nomerika 66.
Nwachukwu Egbunike , Arzu Geybullayeva , Hija Kamran , Oiwan Lam , Zara Rahman , Juke Carolina Rumuat , Taisa Sganzerla  no niara nanoratra ity tatitra ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/09/13/143123/
 hanakana ireo tambajotra finday: https://advox.globalvoices.org/2019/09/04/bangladesh-cuts-access-to-mobile-phone-services-for-the-rohingya/
 nanao fihetsiketsehana faobe : https://www.aljazeera.com/news/2019/08/day-thousands-rohingya-rally-bangladesh-camps-190825055618484.html
 Nanome baiko : https://www.thedailystar.net/rohingya-crisis/no-mobile-phone-services-for-rohingya-refugees-1794367
 famoahana fanambarana: https://www.mmtimes.com/news/filmmaker-sent-prison-criticising-military.html
 fomba fijeriny manakiana: https://frontiermyanmar.net/en/min-htin-ko-ko-gyi-and-the-jealous-nation
 Niharan'ny fanafihana: https://advox.globalvoices.org/2019/09/06/hong-kong-reddit-like-lihkg-faces-unprecedented-ddos-attacks-redirected-from-chinese-internet-companies/
 tafondro goavana ao Shina: https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Cannon
 diabe 31 Aogositra: https://globalvoices.org/2019/09/02/hong-kongs-unauthorized-protests-end-with-riot-police-storming-subway-stations-with-batons-and-pepper-spray/
 any am-ponja ankehitriny : https://advox.globalvoices.org/2019/08/09/nigerian-activist-arrested-for-calling-for-a-nationwide-revolutionnow-protest-movement/
 lalàna vaovao: https://advox.globalvoices.org/2019/09/06/how-turkeys-broadcast-regulator-is-taking-over-the-supervision-of-online-content/
 Nomelohin'ny : https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24909&LangID=E
 fanambarana iombonana mitokana, : https://digitalrightsfoundation.pk/66-womens-rights-human-rights-digital-rights-and-feminists-groups-endorse-statement-on-internet-blackout-in-kashmir/
 Misorata anarana ao amin'ny Netizen Report : http://eepurl.com/Y-f11